ပန်ဒိုရာ: ဘာညာအတွက် ဘာဂါ
Posted by pandora at 7:08 PM
ဘာဘာဂါလဲဟင် ... ?
BBBBBB ၆လုံး ထင်ပ။ မမှားဘူးဆိုရင်ပေါ့။ (ဘာဂါ၀၀)
Belated Birthday Big Burger for Blogger Barnyar
အင်း သူများဘာဂါကို အားပေးရင်းနဲ့ နောက် Bတစ်လုံး ပေါ်လာပြန်ရော။
B ၇-လုံးဗျ။ (ဘလောက်ဂါလေး)
Belated Birthday Big Burger for Blogger Baby Barnyar
ကဲဗျာ..မပြီးနိုင်တော့ပါဘူး။ ဘိုးဘိုးအောင်ဘာဂါလား မသိ။
Belated Birthday Big Burger for Beloved Blogger Baby Barnyar
အား.. ကိုမေတ္တာကြီးလုပ်တာ မိုက်ပ.. နေဦး အနော်စဉ်းစားလိုက်အုံးမယ်.. အား.. သိဘီ..
Belated Birthday Big Burger for Beloved Baby Brilliant Blogger BarNyar (BBBBBBBBB) dan-dan-dan!!!
This is extremely intriguing, You'reaextremely skilled blogger. I've joined your rss feed and look forward to looking for more of your excellent post. Also, I've shared your web web page in my social networks!